ဒူဘိုင်းရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်များနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း UAE ရှိအကူအညီရှာဖွေခြင်း
Abroad Abroad - ယူအေအီးရှိအလုပ်များအတွက်လျှောက်ထားပါ
ဇန်နဝါရီလ 20, 2018
လတ်ဆတ်မှုအတွက်ဒူဘိုင်းရှိ MBA အလုပ်များ
ဇန်နဝါရီလ 28, 2018
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်အလုပ်အကိုင်များ။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်သင်တို့၏အသက်တာကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သင့်အားဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ကူညီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဝှက်ထားသော၏ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စျေးကွက်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအဖွဲ့။ အတိအကျ ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးရန်သင့်အားပိုမိုနီးကပ်စွာရရှိသွားတဲ့။ နှင့်သင်တန်း၏ကြော်ငြာစျေးကွက်မှကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ဖွင့်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်နေရာလွတ်။ သငျသညျသို့ခွဲနိုင်ပါတယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အများအပြားရာထူး။ ဥပမာအားဖြင့်, အွန်လိုင်းစျေးကွက်လည်းမရှိ။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, သင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်အရာတစ်ခုခုကိုရှာနေလျှင်။ သင်သည်အခြားစံချိန်စံညွှန်းမီကြော်ငြာစျေးကွက်ရှိနိုင်ပါသည်။ တီဗီကြော်ငြာနှင့်ဒေသခံ Billboard ကြော်ငြာ။ မာလ်တီမီဒီယာစျေးကွက်လည်းရှိပါသည်။ နှင့်လူတစ်ဦးစျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးမှလူတစ်ဦး။ သင်လုပ်နိုင်သည် အိန္ဒိယကနေလည်းအသစ်သောအနေအထားကိုတှေ့ရ သို့မဟုတ်တောင်အာဖရိက။
၏သင်တန်း, အဓိကဒီရက်စျေးကွက်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များများအတွက်နေရာချခံရဖို့။ သင်သည်ထိုလယ်ပြင်၌အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များ၏အကျယ်ဆုံးအကွာအဝေးတစ်ခုမှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်, သင်သည်နိုင်ပါတယ်စကားပြော ယူအေအီးကုမ္ပဏီများနှင့်တွေ့ပါ။ ထိုမှတပါး, သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် အတော်ကြာအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များမှာသာအွန်လိုင်းအကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များ.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလယ်ပြင်၌အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တော်တော်များများရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်များတွင်ဤအအလုပ်အကိုင်များစတင်ရန်ရှာကြသည်သောသူတို့အဘို့။ သငျသညျအကွောငျးကိုဖတ်သင့် တစ်ဦး Affiliate စာရေးဆရာအဖြစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ သငျသညျကြော်ငြာစျေးကွက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်လျှင်သင်သဘောတူညီချက်သိသင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
အလုပ်ရှာဖွေသူများအများစုမှာမျှော်လင့် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုပေါ်လမ်းညွှန်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များတစ်တွေအများကြီးဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အတွက်အလွန်ရေပန်းစားရာထူးပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ, အင်တာနက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရာထူး ရုပ်မြင်သံကြားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကပိုရိုးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်ကိုမှ။ ဒါ့အပြင် marking ရေဒီယိုသို့မဟုတ် Billboard ရှိသေး၏။ သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်မှုများ၏ဂိမ်းနီးပါးအဆမဲ့ခံစားရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့.
ဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား ထိုကဲ့သို့သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် စားသုံးသူအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကားတစ်စီးအရောင်းအတွင်းစီမံချက်များ။ ကွဲပြားခြားနားကြောင့်ဝတ်ဖို့, စျေးကွက်သုတေသနတစ်ဦးက start အဘို့ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အနေအထားအခြားသူတွေတို့တွင်ဦးဆောင် marketer ဘယ်လောက်ပြိုင်ဘက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဖန်တီးမှုအရောင်းမန်နေဂျာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံကိုဤမြေကွက်၌သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်သို့သော်အချို့အလုပ်ရှင်များငှါ အလုပ်အတွက် MBA ဘွဲ့ရဒီဂရီနှင့်အတူလူငှား အများကြီးပိုမြန်။
ဒါကြောင့်စျေးကွက်ကဘာလဲ တူသောဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း?။ သင်သည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခန်းကဏ္ for အတွက်အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူဖြစ်ပါလိမ့်မည် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အလုပျအတှကျစတငျပွို တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုလူတစ်ဦးအတွက်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးတကယ်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစုံပေါ်တွင်မူတည်သည်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဒူဘိုင်းအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။
တချို့ကသစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများယူအေအီးရှိနှင့်ပြီးသားအလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းငှါ။ သူတို့ထဲကအခြို့ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အပြောင်းလဲပစ်ရန်ရှာဖွေနေ။ အများအပြားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနရှိတယ်လို့နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအသိုင်းအဝိုင်းထံမှလူကြိုက်များဟုခေါ်တွင်မလိုလား။ အဘယ်မှာရှိအိုင်တီယောက်ျားတွေကုဒ်မှတဆင့်တူးဖော်ခြင်းနှင့် SEO ဆိုသည်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အွန်လိုင်းကြော်ငြာတွေ run နေစေခြင်းငှါ လူမှုရေးရည်ရွယ်ချက်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်.
အဆိုပါ အလုပ်သတ်မှတ်ရေးတကယ့်ကုမ္ပဏီလိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်။ တယောက်ကိုတယောက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှငှါအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောတာဝန်များကို၏ရှည်လျားသောစာရင်း။ ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပရှိအလုပ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီ၏။ အသစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များကိုအထူးသဖြင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာသတ်သတ်မှတ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအသိပညာမလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျသစ်တစ်ခုပြည်ပရှိဆိုရင်နှင့် စော်ဘွားတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေ။ အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလယ်ကွင်းသို့မဟုတ်ကြော်ငြာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်း။ သင်လိမ့်မည်သေချာရန်လိုအပ်ပါတယ် သငျသညျကိုသှားမတိုင်မီအများအပြားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု browse။ ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်အများအပြားအမျိုးအစားများနှင့်အမျိုးအစားများရှိပါတယ်လို့ပဲ။ ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်ကိုထုတ်ကုန်များအကြားစက္ကအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တိုးပွားလာအမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအမျိုးအစားများသေးငယ်တဲ့စာရင်းပေးသညျ။ အဆိုပါအများအပြား ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍမိုဘိုင်းဖုန်းကိုကျော်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကိုသင်ကြော်ငြာမန်နေဂျာပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးအထူးကုအဖြစ်အများအပြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလယ်ကွင်းမျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ အများကြီးကြိုတင်ပြီးမီဒီယာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အရောင်းမဟာဗျူဟာဒါရိုက်တာနှင့်များစွာသောပို။ အလုပ်အကိုင်များ၏များစွာသောအခြားမတူညီတဲ့မျိုးရှိပါတယ် သငျသညျအကောင်းတစ်ဒီဂရီရှိခြင်းလျှင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုယ်စားလှယ်များအဘို့။
အောက်ပါနှစ်များတွင်စီးပွားရေးအရည်အချင်းပြည့်လုပ်သားများနှင့်စျေးကွက်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။ ဥပမာ ဒူဘိုင်းအတွက်ဖိလစ်ပိုင်လုပ်သားများ, ထိုမှတပါးယင်း ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကကျွမ်းကျင်သူများ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတော်ကြာအမျိုးအစားများကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ရှိပါသည်။ သင်တစ်ဦးကိုအကောင်းဆုံးကိုက်ညီသောအရာကိုကြည့်ကြသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည် 20 ကျော်ရှိသည်နိုင် အလုပ်အကိုင်အယူအေအီးကုမ္ပဏီများမှအတွက်ကမ်းလှမ်း ကြည့်ရှိသည်။ သူတို့အခွအေနမြေားအောက်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီရာထူးများစာရင်းကိုထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။ သင့်ထံမှများမှာဘယ်မှာဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည် ဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီများထံမှငှားရမ်း, ကာတာကြီးမားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်း။ ထိုအလုပ်မလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးသောနေရာများနှင့်အတူ ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအဖြစ်.
စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူ - အလွန်ဖြစ်လာ ဒူဘိုင်းအတွက်ပိုလတ်ဆတ်ကြားတွင်ရေပန်းစား.
လူမှုမီဒီယာ Manager က - လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
Search Engine Optimization အထူးကု - အခက်ခဲဆုံး 2018 အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်အကိုင်.
အီးမေးလ်ပို့ရန် Marketing Manager - အော်ပရေတာတစ်ဦး VPS နဲ့အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင်တစ်ဦးဘလော့ဂါအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်သည် - Web Content စာရေးဆရာ ကြောင်းအနေအထားအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်.
Web ကိုဖန်ဆင်းရှင် - သင် website တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်ပေါ်မှာ CMS သို့နှင့် HTML ကိုအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကုန်ပစ္စည်း Manager က - သငျရနိုငျနှင့်ရာထူးတိုးခံရသည့်အစာရှောင်ခြင်းအနေအထား။
Marketing ကို Analyst, - တချို့လူတွေကစိတ်ခိုင်မာတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြည်နယ်ရှိခြင်း။
Advertising ကြော်ငြာညှိနှိုင်းရေးမှူး - Facebook အထဲကနေ LinkedIn ကြော်ငြာမှတက်အသက်ရှင်လျက်ပို့စ်စောင့်ရှောက်ခြင်း.
Advertising ကြော်ငြာမန်နေဂျာ - မန်နေဂျာတစ်ဦးချင်းစီ post ကိုအလုပ်လုပ်နှင့်ပိုကြီးတဲ့ပရိသတ်ကိုမှကယ်လွှတ်ခြင်းငှါမေတ္တာရှင်နေကြသည်။
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာ - သင်လျှင် ဆရာဖြစ်လာဖို့မေတ္တာရှင် လူတွေကိုကူညီခြင်းနှင့်ငွေရှာဖို့။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မန်နေဂျာ - စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်, တည်ဆောက်မယ့်ခိုင်မာတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုသော့ချက်.
မီဒီယာဝယ်သူ - ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများနှင့်သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်မှသာ
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ် - သင်တန်း၏, ထိပ်တန်းအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု paidကောင်းမွန်စွာနေရာချထားခြင်းနှင့်ထိပ်တန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလူတစ်ဦး။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်မန်နေဂျာ - အခြားကောင်းစွာ-paid ကမ်းလှမ်းမှုကိုပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အတွေ့အကြုံလိုအပ်ပါသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ဒါရိုက်တာ - CEO ဖြစ်သူရန်အလွန်နီးစပ် နှင့်စီးပွားရေးအတွက်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး။
အီးကောမတ်စ Manager က - ထိုသင်ယူဖို့အမြန်ဆုံးနှင့် paid အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်း။
အရောင်း၏ဒါရိုက်တာ - မလွယ်ကူပါဘူး ဒူဘိုင်း၌ဤအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူတာဝန်စတင်ရန်။ သို့သော်ကောင်းကောင်း-paid အခွင့်အလမ်း။
Marketing ကိုအွန်လိုင်းဒါရိုက်တာ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို run ဖို့မေတ္တာရှင်သူမြားလူတို့အဘို့။
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးစတင်မှတ်တစ်ခုမှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထူးကုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, ကျနော်တို့ကစျေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူဘို့သင့်ကိုအကြံပေးကြသည်။ သင်ဤအနေအထားတွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်။ သင်တစ်ဦးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာများအတွက်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများဒီဇိုင်းနှင့်ဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ထိုအလုပ်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏တိုးတက်မှုထောက်ခံပါတယ်။ နှင့်ကျိန်းသေ, ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေသင်ကူညီ.
အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထူးကုအမှုဆောင်အရာရှိလက်ရှိစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသုတေသနပြုမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့အပြင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ဒူဘိုင်းအတွက်။ ထိုအခါအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဘို့, ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏စစ်ဆေးခြင်းကိုအရာမျိုးကိုစားသုံးသူများကဝယ်လိုအားကောင်းနေသည်။ အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် GCC များအတွက်.
အပြုသဘောဘက်တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထူးကုရောင်းအားတင်ပြချက်များဖွံ့ဖြိုး။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိအသစ်အထူးကုမန်နေဂျာနှင့်ဒါရိုက်တာများအဘို့အအစီရင်ခံစာများပေးဖို့လိုအပျ အကောင်းဆုံးကိုမြို့ဒူဘိုင်းအတွက်။ သငျသညျဖောက်သည်ထံမှသတင်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ. အစီရင်ခံစာများကိုစုသိမ်းနေစဉ်။ သင်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် အသစ်ကစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုအသိအမှတ်မပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အသစ်ယှဉ်ပြိုင်မှုစစ်ဆေးနေထုတ်ကုန်အသစ်တွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာများနှင့်စျေးနှုန်း။
သငျသညျစက်မှုနှင့်နည်းပညာအပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရှာနေဘာပဲ, မီဒီယာထုတ်ဝေ, FMCG, နည်းပညာသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုများ, ငါတို့ပညာရှင်များဒူဘိုင်းမှာသူတို့ရဲ့စံပြအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရာတွင်အတွေ့အကြုံနေကြသည်။ အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဒူဘိုင်းအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်။ သငျသညျဆိုသညျကားအဘယျသို့အဘယ်သူမျှမကိစ္စ။ အကောင်းဆုံးကိုအမှုဆောင်အရာရှိအောင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။
သင်စျေးကွက်စီးပွားရေးစတင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ။ သေချာဘို့သင့်ကိုအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အမြဲတမ်းသင်သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိသေချာပါစေ။ အဘယ်မှာရှိ သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရရှိရန် hit ချင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, စျေးကွက်အလုပ်အကိုင်များကိုအကောင်းဆုံး-paid အခွင့်အလမ်းများတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။
ဒါကြောင့်သင်ကဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်ဖြစ်ဖို့ရှာနေလျှင်။ သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနည်းဆုံး5နှစ်ပေါင်းသုံးဖြုန်းသင့်တယ်။ ထို့အပွငျအကြီးတန်းရာထူးများအတွက် 10 နှစ်များတဝိုက်ဖြုန်းနေကြတယ်။ အကြီးတန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရကြောင်းလွယ်ကူသောမဟုတ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ရရှိရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကစူပါခက်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လူအပေါငျးတို့ထကျပါသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းတွင် MBA ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူ.
ဒူဘိုင်းအတွက် SEO ဆိုသည်မှာနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အခက်ခဲဆုံးအလုပ်တစ်ခုမှာ SEO ဆိုသည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Search Engine Optimization ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နေ့လျှင် 12h ကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်အထူးကု။ သူကဤကဲ့သို့သော Google နှင့် Bing မှအဖြစ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုခက်ခဲနေပါစေ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူသစ်တစ်ခုလူတစ်ဦး website တစ်ခုအဘို့အရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်တိုးတက်အောင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရန် နှင့် Google အထူးကုအတူလုပ်ကိုင်။
Google ကမြင့်မားရာထူးရောက်ရှိဖို့သင့်လျော်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုရွေးချယ်ခြင်းအဆိုပါ SEO ဆိုသည်မှာအတိုင်ပင်ခံ။ အဓိကပစ်မှတ်များမှာ အသိအမြင်မြှင့်ရန် သူတို့ရဲ့ search engine ကိုပါ။ အဓိကကစားသမားများမှနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကပိုဒိုမိန်းအခွင့်အာဏာကိုရယူခြင်း။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အ optimization အားထုတ်မှု, အစဉ်မပြတ်ကောင်းစွာအလုံအလောက်အလုပ်လုပ်ဘူး။ SEO ဆိုသည်မှာများ၏အပြုသဘောဆောင်ခြမ်းတွင်နှင့် စျေးကွက်က MBAသင်တစ်ဦးဒီဂရီမလိုအပ်ပါဘူးဒါအတူတူမလာပါဘူး။
ဒူဘိုင်းအတွက် SEO ဆိုသည်မှာနှင့်စျေးကွက်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရန်ဖြစ်ပါသည် Forbes မဂ္ဂဇင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Emaar ဂုဏ်သတ္တိများအဖြစ်ကုမ္ပဏီများသည်နှိုင်းယှဉ်။ ထိုအခါအပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ, သင် SEO ဆိုသည်မှာနည်းဗျူဟာအမျိုးမျိုးသုံးပြီး SEO ဆိုသည်မှာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးပိုကောင်းအောင်နိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းက်ဘ်ဆိုက် optimization ဖြစ်စဉ်ကို3လအထိ 12 ထံမှမူတည်ကြာပါသည်။ နှင့်အဓိကအားဖြင့် keyword ကို-ဘလော့ဂ်အကြောင်းအရာရေးသားခြင်းပါဝင်ပါသည်။ သို့သျောလညျး သငျသညျကွီးစှာသောဘလော့ဂါမဟုတ်ပါလျှင် သငျသညျလူမှုရေးမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများအတွင်းစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်ပိုကောင်းအောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသေချာ header ကို tags များနှင့် alt + tags များအောင်စာသား၌ရှိကြ၏။ ထို့နောက်က်ဘ်ဆိုက်ပေါ် meta tag များနှင့်အတူကနှိုင်းယှဉ်။
စျေးကွက်၏အများစုမှာလည်းမန်နေဂျာနှင့်ဒါရိုက်တာအာမခံပါသည်။ သူတို့ကို website တစ်ခုနှင့်အလားအလာရွယ်များ၏ခြုံငုံဒီဇိုင်းအကြောင်းကိုအသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်။ အမြဲတမ်းကိုပိုမိုတန်ဖိုးများကိုရရန်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုကြိုးစားနေပိုကောင်းစေပါတယ်။ SEO ဆိုသည်မှာအထူးကုပြီးတော့ဒူဘိုင်းအတွက် SEO ဆိုသည်မှာကမ်ပိန်း၏ထိရောက်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လုပ်ဆောင်နေ။ သငျသညျအလုံအလောက်ကောင်းသောရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်ကစျေးကွက်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ဒီကဏ္ဍအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။
ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုတာဘယ်လိုလဲ ဒူဘိုင်းအတွက် Manager ကို?
ဒီဂျစ်တယ်ဖွဲ့စည်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာဖွေရန်။ သငျသညျကျိန်းသေဒေသခံအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဈေးကွက်မှာကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သေချာဘို့သင့်ကိုအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ကောင်းပြီ, သင်လူသိများပလက်ဖောင်းတစ်ဦးကိုစတင်သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များဘို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် branded ရ။ အကောင်းဆုံးဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများသည် LinkedIn နှင့်များမှာ Googleနှင့်သင်တန်းက Facebook ၏။ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်များများအတွက်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလျှောက်လွှာအပေါ်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သာထောက်လှမ်းရေးနှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နည်းပညာသာလူ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူမြင့်တက်။ အတွက်ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီများမှမှာ ဒူဘိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ထမ်းတွေ့ပါ။ စိတ်ကိုမီဒီယာ၌ဤအတူ, စျေးကွက်အရှိဆုံးအရေးပါသောဆုံးဖြတ်ချက်များပါစေ။ သင်တန်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွင်း၌လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ရောင်းချမှုနှင့် ပတ်သက်. ။ ဒူဘိုင်း၌ဤအကြောင်းပြချက်သည်ခပ်သိမ်းသောစျေးကွက်။ ကမ္ဘာ့အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကိုရှာဖွေနေပင်မွန်ဘိုင်း.
Marketing ကိုတာဝန်ဝတ္တရားပါ။ ဤသည်မှာအခန်းကဏ္ဍဒစ်ဂျစ်တယ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, မဟာဗျူဟာနှင့်သေဒဏ်စီရင်ပေးခွငျးအားဖွငျ့ဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထောက်ခံပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အသင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စျေးကွက်စီးပွားရေးအားလုံးဒီဂျစ်တယ် channel များကိုဖြတ်ပြီးကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအားပေးအားမြှောက်နဲ့ အကြံဉာဏ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကို။ အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကနှင့်ကျယ်ပြန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုလုံးကိုရန်။ အလွန်ကောင်းသောဥပမာကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဟိုတယ်အတွက် marketer အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဤသည်မှာအခန်းကဏ္ဍခရီးသွားလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏မြှင့်တင်ရေးပါဝငျသညျ။
ဒူဘိုင်းအတွက်လူမှုမီဒီယာ Marketing Manager
စျေးကွက်များအတွက်နောက်ထပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်တော်တော်များများအချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကိုတဆိုရှယ်မီဒီယာမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဟိုတယ်နှင့်အရောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးကြီးသော။ ဒီအနေအထားဟာကုမ္ပဏီရဲ့လူမှုရေးမီဒီယာစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုများစီမံခန့်ခွဲ။ ထိုပါဝငျမညျ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ Center ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ Call။ ထိုအထိုကဲ့သို့သောကြားခံနှင့် Facebook နှင့် LinkedIn တိုက်ရိုက်အကောင့်အဖြစ်အစီအစဉ်များ။
ဤသည်မှာအခန်းကဏ္ဍလုပ်ဖို့အများအပြားတာဝန်များကိုပါဝငျသညျ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သင်၏အကြီးတန်းမန်နေဂျာကိုသေချာနိုင်ပါတယ် လူမှုမီဒီယာအကောင့်နေ့တိုင်း update လုပ်နေကြတယ်။ ထို့အပြင် post ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဘို့စီစဉ်ထားသည်။ ပုံမှန်တွင်, သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ဒူဘိုင်းအတွက်သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် နှင့်ဖောက်သည်များဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့ပို့စ်များ။
ဒီအခန်းကဏ္ဍ၏ရည်မှန်းချက်တတ်နိုင်သမျှအများအပြားနောက်လိုက်ရရန်ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုမီဒီယာများအတွက်, မန်နေဂျာအတွက်အဓိကသော့ချက်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းမှ, သငျသညျသစ်ကို client များသို့မဟုတ်အရောင်းအလုပ်မလုပ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဓိကတာဝန်များကိုတာဝန်ရှိသည် တက်ကြွစွာလူမှုမီဒီယာနောက်လိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဘို့ နှင့်သြဇာ။ အကြားအလွန်ရေပန်းစား အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်.
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရုပ်သံလိုင်းကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းမီဒီယာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍတစ်ခုကြီးထွားလာစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယာမန်နေဂျာများအတွက်စုဆောင်းဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများသည်။ အွန်လိုင်းမှစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာအဖြစ်, သင်စျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုခြေရာခံများနှင့်အစီရင်ခံရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းတွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး အညီဒီအခန်းကဏ္ဍအားထုတ်မှုညှိ။
သငျသညျရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် ဒူဘိုင်းရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက် အွန်လိုင်းမှမန်နေဂျာအဖြစ်။ သငျသညျအများအပြားစုဆောင်းမန်နေဂျာရောက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင်၌-တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပွုဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအကြောင်းကိုသူတို့နှင့်အတူစကားပြောဖြစ်ပါတယ် စုဆောင်းမှုအုပ်စုများ Bitcoin။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်ရှာဖွေဘို့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာသုံးစွဲဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့မှာတော့အများကြီးရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အခွင့်အလမ်း။ သူတို့အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အဓိကကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြ၏။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်တစ်ဦးကြည့်သင့်ပါတယ်။ နှင့်ကျိန်းသေ, အခြားသူများကိုသင်တစ်ဦးအလုပ်သစ်ဆင်းသက်ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာစစ်ဆေးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျရှာတှေ့နိုငျ ဒူဘိုင်းအတွက်ဘဏ်ထဲမှာအလုပ်အကိုင်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ဒူဘိုင်းစီးတီးမရေမတွက်နိုင်သောအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့မှ ok, အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည် လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူး။ ဒါကကျိန်းသေအမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံကျော်လမ်းလျှောက်ရုံးသို့ pop နိုင်ပြီး အနီးဆုံးအင်တာဗျူးများ၏ရက်စွဲများတောင်း။ အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များကိုသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းသောသူတို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အလုပျတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုအတွက်ထားပါ။
သငျသညျအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ထိမှန်နိုင်မည့်နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည် ယူအေအီးအတွက်မော်တော်ယာဉ်အလုပ်အကိုင်များ။ ကောင်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေတာမျှော်လင့်ထိုကဲ့သို့သောမာစီးဒီးနှင့် Porsche အဖြစ်ကုမ္ပဏီများအများစုဟာ။ သို့သော်ငြားလည်း, သင်ရုံသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုစတင်ရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်။ သငျသညျ၌ကျင်လည်ခြင်းနှင့်သူတို့လေ့ကျင့်ရေးရာထူးများအတွက်လူတွေယူပြီးလျှင်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကကိုယ့်ကိုမေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒူဘိုင်းအတွက်ဒေသခံအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်နေ့တိုင်းရှာဖွေနေစောင့်ရှောက်.
ဒါကြောင့်စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းတွေအဘို့ပါပဲ။ အဆိုပါအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်သင်တို့နှင့်အတူအဖြစ်နှင့်သင့်ကိုကူညီနိုင်ပါစေ Marketing ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒူဘိုင်းအတွက်အိပ်မက်မက်ရှာပါ။
တစ်ဦးကိုရှာပါ ဒူဘိုင်းယောဘ? သငျသညျအစမှကိုကြည့်သင့်ပါတယ် အကြံပေးငှားရမ်း နှင့် ထိပ်ဆုံး rated စုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသင်အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ရိုးရှင်းစွာကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload နှင့်တစ်ဦးကိုစတင်ရန် အသစ်အလုပ်အကိုင် ဒူဘိုင်း!
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ! - ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ